Ukuphupha inja Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Izinja zezinye zezona zilwanyana zidumileyo. Ingakumbi xa besebancinci, bayazifudumeza iintliziyo zabantu abaninzi: iinjana zihlala zisoyisa kwaye zinomtsalane ngokusika kwazo.
Injana efakiweyo inokubaluleka kumaphupha ethu. Akuqhelekanga ukuba abantu babone uninzi lwezi zilwanyana zincinci ngelixa zilele, zidlala nazo, okanye ziziphulula. Njengophawu lwephupha, kufanele ukuba bahlale behlulwa luphawu "lwenja", njengoko befanekisela into eyahlukileyo kwinja endala kwaye bengabhekiseli kwiimpawu ezifanayo nakwimiba yobomi bomntu ekuthethwa ngaye.
Kukwabalulekile kuhlalutyo lwamaphupha ukuba yayiyinja yenjana okanye yikhwenene okanye ingcuka. Apha ukutolika kwahluka kancinane!
1 Uphawu lwephupha «injana» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «injana» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «injana» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «injana» - ukutolikwa ngokubanzi
Injana luphawu oluqinisekileyo noluthembisayo lwephupha. Kukholelwa ngokubanzi ukuba ubonise ubuntu eluncedo a.
Nabani na ophupha injana uya kubonwa kubomi babo bokwenyani njengomntu ohlala kakhulu kwaye onobuhlobo. Ukuba umntu ufuna uncedo ngalo mntu kuthethwa ngaye kwaye uxhomekeke kwinkxaso kwiimeko ezithile, uya kuba lapho ngokuzincama kwaye uya kuthandwa kwaye axatyiswe ngaba bantu ngenxa yalo. Ngokukodwa abantu ababonakala ngathi banethamsanqa elibi ebomini babangela usizi olukhulu ephupheni.
Iinjana nazo zinokuba ne isimemo ukwazisa umbhiyozo owonwabileyo, kodwa uphawu lwephupha apha luqulathe isilumkiso sokonwaba, kodwa ngendlela enobuntu. Nantoni na engaphaya koko inokumenzakalisa umntu ekubhekiswa kuye.
Ngokukodwa injana ezinomdla neziphaphileyo zinokuphupha ngokwazo. Abahlobo Ngokulandelanayo. Babonisa ukukhula okuluqilima koku, oko kukuthi, ukusuka kubuhlobo bephupha, uyakhula unxibelelwano olunzulu nolusenyongweni, ongasayi kuphinda ufune ukwenza ngaphandle kobomi bakho. Ukongeza, ngokoluvo oluqhelekileyo, iinjana ezinobomi nazo zinako butyebi ukwazisa.
Kuphela ukuba injana ebuthathaka kwaye egulayo ibonwa ephupheni, iphupha elo kufuneka libonwe njengophawu olubi: kule meko, abantwana bezilwanyana kungekudala banokuba ngaphambili Ilahleko y Ilahleko ukulumkisa.
Uphawu lwephupha «injana» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwendlela yokutolika kwengqondo, uphawu lwephupha lumele iimpawu zenjana yomntu kuthethwa ngaye. Uyazenzekela, uvulelekile kwaye unomdla. Kwakhona, kubomi bokwenyani, isilwanyana ngokukhawuleza sifumana ukuzithemba kwabanye abantu esingabaziyo.
Ngokuphupha injana, i-subconscious yephupha lakho liyabuza oku iipropati kwaye ungalahli isimilo esihle. Kuya kufuneka uqhubeke ukufikelela ebantwini abanobuhlobo kwaye ngokwenza njalo (ngokweemvakalelo) unxibelelwano oluxabisekileyo.
Uphawu lwephupha «injana» - ukutolika kokomoya
Injana inokuba luphawu lweemvakalelo, ezibuthathaka ekutolikeni amaphupha okomoya. unxibelelwano phakathi kwabantu nezilwanyana. Injana inika abantu uthando nokuthemba kwaye iyabathuthuzela xa bengaqhubi kakuhle.